सफ्टवेयर – Nepali Tech Blog
All Posts in सफ्टवेयर
तपाई आफ्नो मोबाइल दिनमा कति पटक छुनु हुन्छ ? कहिलै यस्तो जानकारी लिनु भएको छ ? एक छिन पर्खनुहोस् । मोबाइल यो युगको अचम्मै लाग्दो चमत्कारी वरदान हो । यसका कति फाइदा छन् वा यसले कस्तो कस्तो चमत्कार गरेको छ भन्ने कुरा म यहाँ लेख्न लागिरहेको होइन । मेरो आजको पोस्टको कारण हो, मोबाइलको कुलत… (0 comment)
In: सफ्टवेयर|Last Updated: July 6, 2014
अनेक समस्याहरु आइपर्छन् कम्प्युटरमा । भर्खरै नयाँ गुगल क्रोम इन्स्टल गरेँ । अचम्म, क्रोममा सबै वेबसाइट खुल्छन् तर गुगल डट कम र जिमेल भने मरिगए खुल्दैन । यस्तो देखिन्छ । अरु ब्राउजरबाट भने मज्जाले गुगल खुलिरहेको थियो । रिस्टार्ट गरेपछि भने क्रोममै पनि खुल्यो गुगल र जिमेल । तर फेरि एकछिनमा नचल्ने । के चैँ… (0 comment)